26 Jiona 2012 : tsy hanatrika ny Ankolafy RAVALOMANANA (+vidéo) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
26 Jiona 2012 : tsy hanatrika ny Ankolafy RAVALOMANANA (+vidéo)
« Tsy ampy ny finiavan’ny mpitondra hamaha ny krizy ka tsy resy lahatra ho any Mahamasina ny tenako » hoy Mamy Rakotoarivelo raha niresaka momba ny fankalazana ny fahatsiarovana ny fahaleovan-tena amin’ity taona ity. Nambarany mantsy fa ny amboletra ataon’i tgv hihazo an’i Rio dia mampiseho avy hatrany fa tsy maha-maika azy ny hamahana ny krizy. Ny fivoriana hatao any Brezila rahateo dia handinihana ny asa antoninezaka sy lavitrezaka ho an’ny fampandrosoana an’izao tontolo izao izay tsy asa iandraiketan’ny tetezamita velively.
Namafisin’i mamy Rakotoarivelo fa nangataka ny Ankolafy RAVALOMANANA mba hatao alohan’ny 26 jiona ny fihaonan’ny Filoha RAVALOMANANA sy i tgv saingy raha hanainga ny alatsinainy izao hihazo an’i Rio ity farany dia tsy ho tanteraka velively izany. Efa nilaza mazava anefa ny teo amin’ny SADC fa hisy ny sazy hampiharin’ny mpanelanelana amin’izay minia mampikatso ny famahana izao krizy mahazo ny Malagasy izao ary voakasik’izany ny fanatanterahana ny fampihaonana azy mirahalahy mianaka koa dia miandry izay fanapahan-kevitry ny mpanelanelana ny Ankolafy RAVALOMANANA. Hatreto aloha raha ny fanazavana dia mbola soso-kevitra ihany ny tsy fanatrehana ny lanonana fhatsiarovana ny fahaleovantena ho an’ny Ankolafy iray manontolo satria, raha mbola azo atao, dia vonona ny hijery ny marimaritra iraisana izy ireo « mba tsy ho tonga amin’ny tsotsoromamba isarahana ny fiaraha-mitantana » hoy hatrany ny fanazavan’ny lehiben’ny delegasiona Ankolafy RAVALOMANANA.